​Puntland: Wasiirka warfaafinta oo is-casilay
GAROWE, Puntland- Wasiirka wasaaradda warfaafinta Puntland Maxamud Xasan Soocadde, ayaa goordhaweyd ku dhawaaqay inuu iska casilay jagadaasi, wuxuuna ka gaabsaday inuu faah faahin ka bixyo arrinta keentay banneenta booskaas uu mudada hayay.
Soocadde, ayaa xusay in istiqaaladani ku timid waxyaabo gaar u ah, isagoo meesha ka saaray inay jiraan khilaafaad u dhaxeeya isaga, madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa.
Wuxuu sheegay inuu Cabdiwali Gaas, u gudbiyay war-qadda shaqo tagista taasoo uga aqbalay si sharaf leh sida uu hadalka u dhigay.
Arrintan, ayaa timid xilli la filayo in Madaxweynaha Puntland isku shaan-dhayn ku sameeyo golihiisa wasiirrada taasoo mas'uuliyiin badan farta wadanaha ku hayaan, halka warar kale sheegayaa in xubno badan oo kamid ah golaha wasiirrada raadinayaa kuraasta Barlamanka Somalia.
Soocadde, ayaa labo xil oo kala duwan soo qabtay mudadii uu madaxweynaha ahaa Cabdiwali Cali Gaas, kuwaasoo kala ahaa xilka maanta uu iska casilay iyo mid uu kasoo qabtay wasaaradda Ganacsiga.
Tan iyo markii uu noqday wasiirka warfaafinta, waxaa cirka isku shareertay khilaafka kala dhaxeeyay bahda warbaahinta, waxaana sannadkan gudahiisa ku hanjabay inuu dili doono warbaahinta kadib markii loo hogaansami wayaya amar uu soo saaray oo ahaa inaan wararkooda la baahin siyaasiyiin dhaliilsanaa xukuumadda Gaas, taasoo dhalisay dood badan oo gaartay ilaa madaxweynaha.
​Warbaahinta Puntland oo dacwad ka gudbin doonta wasiir Soocade [Dhagayso]
Puntland 10.07.2016. 14:04
GAROWE, Puntland- Guddoomiyaha ururka Saxafiyiinta Puntland ee MAP Faysal Khaliif Bare oo maanta 10 July, 2016 shir jaraa'id ku qabtay afaafka hore xarunta maxkamadda darajada koowaad gobolka Nugal ee magaalada Garowe, ayaa ka hadlay siyaasadda wasiirka warfaa ...
​Madaxweyne Puntland oo kulan la qaatay xubno kasocda warbaahinta madaxa bannaan
Puntland 26.07.2016. 21:28
​Shacabka Garowe oo ka hadlay handadaada wasiir Soocade [Dhagayso]
Puntland 26.06.2016. 16:36
Puntland: Faah faahin tirada dhimashada dagaalka Suuj iyo mallayshiyada gacanta lagu hayo
Puntland 20.03.2016. 19:10
​Dagaal ka bilowday Garacad Mudug [Dhagayso]
Puntland 20.03.2016. 08:09
​Wasiir Soocade "Dagaalka Suuj waa la soo afmeeray"
Puntland 19.03.2016. 23:19
Daawo barnaamijka Wasaarada Warfaafinta Puntland shaqada kaga joojisay Universal TV
Puntland 05.03.2017. 14:42
Puntland oo shaqada ka joojisay Universal TV
Puntland 05.03.2017. 12:25
Puntland oo codsi ka dhan ah Goodax Barre u dirtay DF Soomaaliya 20.04.2019. 06:58
Maxaa keenay baaqashada shirkii uu Farmaajo isugu yeeray maamulada? 20.04.2019. 06:22
Gabar uu madaxwayne dhalay oo diiday xil sare oo uu aabaheed la rabay 20.04.2019. 06:12